करोडपति बन्नेका हातमा यस्ता रेखा हुन्छन्, तपाईको हातमा छ ?
HomeDharmaकरोडपति बन्नेका हातमा यस्ता रेखा हुन्छन्, तपाईको हातमा छ ?
धनी बन्ने रहर कसलाई हुँदैन र ? एक व्यक्ति पक्कै पनि जीवनमा करोडपति र अरबपति बन्ने सपना देख्छ। हस्तरेखामा यस्ता धेरै रेखाहरू छन् जसले व्यक्ति धनी बन्ने संकेत गर्छ। यसका लागि हातमा रहेको शनि पर्वत सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। यदि शनि आरोहण लाभदायक स्थितिमा छ र कुनै अशुभ चिन्ह छैन भने यसले राम्रो धनको संकेत गर्छ। यो माउन्ट शुक्रको अवस्था हो।
शुभ र शुभ स्थितिको शुभ पहाडले पनि राम्रो धन प्राप्ति हुने संकेत गर्छ। यदि शनि पर्वत पूर्णतया खाली छ भने, यसको मतलब व्यक्तिलाई धनको कमी हुनेछ। शनिको पर्वतमा माथिको तर्फबाट मिनि रेखाहरू हुनु शुभ संकेत हो। अर्थात् भाग्यले साथ दिनेछ र धनसम्पत्ति हुनेछ, तर अर्बपति बन्नको लागि केही रेखाहरू पनि हुनुपर्छ ।
यदि हातमा मस्तिष्क वा बुद्धि रेखा छ भने यो शुभ संकेत हो। जीवन रेखाबाट कुनै रेखा शनिको पर्वतमा पुग्यो भने धनी हुने संकेत देखिन्छ । शनि पर्वतमा पनि यो रेखामा राम्रो रेखा हुनु आवश्यक छ। यदि कुनै रेखाले जीवन रेखा पार गरी शुक्र पर्वतबाट बाहिर निस्केर शनि पर्वतमा पुग्छ भने त्यस्तो व्यक्ति जन्मजात करोडपति र अरबपति हुन्छ। यदि यी रेखाहरूको योगले जीवन रेखाबाट रेखा निस्किएर सूर्य पर्वतमा पुग्यो भने व्यक्ति जीवनमा करोडपति बन्न बाध्य हुन्छ। यि शुभ रेखाहरुको बीचमा बृहस्पति पर्वतमा कालो तिल बनेको छ भने यो अशुभ संकेत हो ।
यस्तो व्यक्तिले करोडौं रुपैयाँको धन पनि बर्बाद गर्छ। यदि दुबै हातमा यी शुभ रेखाहरू छन् भने यो शुभ संकेत हो। यदि नङमा सानो चन्द्रमा बनेको छ भने यसलाई पनि शुभ चिन्ह मानिन्छ। यो चिन्ह प्रगतिको संकेत मानिन्छ। यदि बृहस्पति पर्वतको औंलामा यो चिन्ह बनेको छ भने यसले सरकारी जागिर पाउने संकेत गर्छ।
See also जोतिस शास्त्रअनुसार यो वार जन्मने मानिस एस्तो
(यस आलेखमा दिइएको जानकारीमा पूर्णतया सत्य र सहि हो भनी हामी दावी गर्दैनौं र तिनलाई अवलम्बन गर्दा अपेक्षित नतिजा आउनेछ। सर्वसाधारणको हितलाई ध्यानमा राखी मात्र प्रस्तुत गरिएको छ।)
Previous articleशनिबार यसरी बिताउनु भयो भने शनिदेव प्रसन्न हुनुहुनेछ
Next articleचाणक्य नीतिः श्रीमती र सन्तानको अगाडि भुलेर पनि नगर्नुहोस् यी काम, घाटा हुन सक्छ